GoAnimate: Abuur kartoonno wakhtiga rikoodhka ah | Abuurista khadka tooska ah
GoAnimate waa sharad ku cusub adduunka maqalka. Waa xulashada lambarka 1aad ee adduunka ee is-abuurka 2D. Waa bog internet oo noo oggolaanaya inaan abuurno 2D animations leh tayo la aqbali karo isla markiiba. Waxay na siisaa adeeg leh labadaba hab bilaash ah sida hab premium. Si loo sameeyo tijaabo ku saabsan hawlgalkeeda oo loo hubiyo natiijada ay na siin karto, uma baahnin inaan ka mid noqono xubinnimada, laakiin sida iska cad xulashadani waxay leedahay xoogaa xaddidan. Marka ugu horreysa, ma awoodi doonno inaan soo dejino abuuritaankeenna (inta aan ku jirno adeegga caymiska waxaan awoodi doonnaa inaan ku soo dejino iyaga tayada HD), sidoo kale ma habayn karno astaamaheenna waa inaan la jaanqaadno bangiga in bogga laftiisa wuu ina siiyaa, laakiin haddii aan nahay kuwo heer sare ah waan awoodnaa.
Soo jeedinta noocan ah waxay soo bandhigtay dhammaan noocyada ra'yiga. Xirfadlayaal badan oo adduunka animation ah ayaa ka gaabsaday doorashadan sababo kala duwan awgood. Waa iska cadahay in natiijooyinka Goanimate ay na siin karaan aysan la kulmin waxyaabaha laga filayo dhammaan isticmaaleyaasha maadaama ay leedahay a xadidan (in kasta oo ay aad u kala duwan tahay) dhaqdhaqaaqa iyo muujinta. Dhinaca kale, shaqada animatorku had iyo jeer waa mid caajis badan, taxaddar leh oo beddelkan ayaa ka dhigaya geeddi-socodka ku-koobnaanta dhowr qasab, si aan waqti badan u badbaadinno, laakiin waa maxay qiimaha?
Waxay kuxirantahay had iyo jeer mashruucyada iyo ujeedooyinka midkasta. Shaki la'aan, kartida ugu weyn ee ay bixiso waa hawlgalkeeda fudud iyo dhammaystirkiisa xirfadeed. Qof kastaa wuu sameyn karaa wuuna ilaaliyaa waqtiga (maadaama aanan u baahan doonin aqoon ku saabsan sawir ama barnaamij) iyo lacag aad u fara badan. Ma rabtaa inaad kobciso meheraddaada ama aad sameyso fiidiyoow sharraxaya oo ku saabsan adeegyada aad bixiso? Ma rabtaa inaad abuurto muuqaal video asal ah oo indhaha soo jiita? Ma waxaad u jeceshahay adduunka majaajilada iyo waxyaabaha yaryar? Midkood kiisaskaas Goanimate ayaa kaa caawin kara, laakiin sidoo kale waa inaad maskaxda ku haysaa taas ma awoodi doontid inaad abuurto filim animated ah ama taxane xirfadeed gebi ahaanba iyada oo xulashadan.
Noocyada noocyada kala duwan ee ay bixiso waa kuwo aad u ballaadhan, waxay leedahay qaybo si gaar ah loogu talagalay adduunka ganacsiga, sidoo kale kuwa kale oo loogu talagalay adduunyada animation-ka caadiga ah (anime, adduunka qosolka leh ee qaabka Guy-ga ...) ama sidoo kale kuwa kale oo leh bilic aad u yar Dhanka kale waxaan ku dari karnaa saamaynta codka, muusigga oo xitaa leh a nidaamka dubbiyuuga taas oo aan ku siin karno cod jilayaashayaga isla markaana isku mar ku dhaqi karno dhaqdhaqaaqa bushimahooda.
Abuurista kartoonnada waligeed ma fududaan. Oo ma kula tahay?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » GoAnimate: Abuur kartoonno waqtiga rikoodhka ah
Waad ku mahadsantahay tallada Fran, waan hubaa inaan dhowr saacadood ku keydin doono meeleynta iskuulka
Mahadsanid!! : D
Ku jawaab Micmic